Jigjiga magacyada wasiiro baxsaday iyo kuwo xabsi Guri laga dhigay. | ogaden24
Jigjiga magacyada wasiiro baxsaday iyo kuwo xabsi Guri laga dhigay.
Shakhsiyaadkii ugu muhiimsan kooxda Jigjiga oo in dhowaale Fari ku Gudnayd kadib markii uu soo baxay shaki laxidhiidha in damac kaga Jiro booska Horjooganimada Kililka, ayay qayb kamid ahi baxsatay halka qaarna xabsi Guri laga dhigay.
Kuxigeenkii hore ee Cabdi iley sidoo kalana ku magacawnaa wasiirka waxbarashada ayaa lagu soo waramayaa inuu u baxsaday dhinaca magaalada Addis ababa, kadib markii kudhowaad mudo Todobaad ah laga waayay Gurigiisii magaalada Jigjiga.
Kadib baxsashada Mawliid Haayir ayaa waxaa xabsi Gurigu lagu soo rogay shakhsiyaad kale oo Hore uga tirsanaa kooxda Jigjiga, waxaana shakhsiyaadkaasi safka hore kaga Jira Cabdicasiis Maxamed, Axmed Shukri iyo 3- shakhsi oo kale.
Waxaa Jira warar isa soo Taraya oo sheegaya in shakhsiyaadka baxsaday uu kamid yahay Cabdicasiis oo mar ahaa shakhsiyaadka ugu itaalka roon kooxda Jigjiga marka laga yimaado Horjooge Cabdi iley, balse warka sheegaya baxsashada Cabdicasiis ayaa ah mid aan la hubin marka laga yimaado in si Hoose looga hadal hayo magaalada Jigjiga.
Shakhsiyaadkan oo intooda badan Hore looga qaaday xilalkii ay hayeen ayaa iska dhex Joogay magaalada Jigjiga balse Mawliid Haayir oo aan xil wareejin lagu samayn, ayaa muuqata inuu isagu la baxsaday xilkii macmalka ahaa ee uu ku magacawnaa.
Shakhsiyaadkani ayuu Horjoogaha maamulku uga shakiyay xidhiidho ay lasameeyeen xubno sare oo kamida kooxda EPRDF, kuwaasi oo ay Hore ugala hadleen is badal lagu sameeyo maamulka Kililka iyo kan xisbiga taasi oo keentay inuu karifo baalasha Horjooge Cabdi iley oo u arkay inay ku caasiyeen.